स्वस्थ रहन एक दिनमा कति पानि पिउनुपर्छ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य स्वस्थ रहन एक दिनमा कति पानि पिउनुपर्छ ?
२०७८, १९ असार शनिबार १६:४३
शरीरको आवश्यकताअनुसार स्वस्थ रहने गरी पानी पिउनुपर्छ । पानी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो भए पनि कति पानी पिउने भन्ने कुरा हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेहुन्छ । कतिपय मानिसलाई पानी पिउन मन लाग्दैन । उनीहरूलाई पानी मीठो लाग्दैन । बरु तिनीहरू चिया, कफी, नरिवलको पानी र जुस पिउन रुचाउँछन् ।
यी पेय पदार्थले शरीरलाई चाहिने पानी उपलब्ध गराउने भए पनि यी शुद्ध पानीको विकल्प हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।पानी शरीरको मुख्य रसायन र शरीरमा उत्पादन हुने विकारयुक्त पदार्थ निकाल्ने पदार्थ हो । पानीले शरीरका जोर्नी, तन्तु, मांसपेसीदेखि कोषहरूलाई रसिलो राख्छ र सजिलोसँग चल्न सहयोग गर्छ । पानीले शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्छ, कब्जियत घटाउँछ, शारीरिक प्रक्रियालाई सही राख्न सयहोग गर्छ । पानीले खाना पचाउनसमेत सहयोग गर्छ ।
Previous articleकोरोना भाइरस : बिरामी जनता कि सरकार ?
Next articleजापानको आसाकामा आयोजित प्रथम समर कपको उपाधी आयोजकलाई